Macquul Maaha!! - Mushaharka Uu Barcelona Ka Qaato Ronald Araujo Oo Dunida Argagax Ku Riday - GOOL24.NET
Macquul Maaha!! – Mushaharka Uu Barcelona Ka Qaato Ronald Araujo Oo Dunida Argagax Ku Riday
Waxa banaanka lasoo dhigay mushaharka layaabka leh ee uu daafaca dhexe ee kooxda Barcelona ee Ronald Araujo ka qaato kooxdaas xilli ay jiraan warar la xidhiidhinaya inuu iskaga tagayo Camp Nou.
Warbixino dhawaan soo baxay ayaa sheegayay in Araujo uu u sheegay Barcelona inuu muhiimada koowaad siinayo sidii uu kooxda kusii joogi lahaa balse ay tahay in lagu abaalmariyo mushahar ah doorkiisa kooxda oo u qalma dadaalka uu bixiyo.
Mushaharka Araujo ee Barcelona ayaa ah sanadkii 900,000 oo euro taas oo ka dhigan inuusan xataa sanadkii oo dhQan 1 Milyan oo euro qaadan halka dunida ciyaaryahanada qaar ay toddobaadkii 1 Milyan oo euro mushahar u qaataan.
Mushaharka Araujo ayaa ah mid kamida waxyaabaha caqabada ku ah heshiis uu u saxeexo Barcelona. Marka laga yimaado inay xiisaynayso Real Madrid oo ay cadaawad weyni kala dhaxayso Barca sidoo kale waxa saxeexiisa doonaya tiro kooxo Premier League ah.
Ronald ayaa leh dhammaan tilmaamaha uu kaga ciyaari karo Premier League, waa mid aan wax cabsi ahi ka muuqan, xoogan, kubaddaha sarre ku fiican isla markaana leh kalsooni marka uu kubadda xaga dambe kasoo riixayo.
Wadahadaladii heshiis kordhinta ee Barcelona iyo Araujo ayaa istaagay, ciyaaryahanka ayaa ah mid uu matalo Edoardo Crnjar halka uu Barcelona heshiiskii uu ugu biirayay lahaa ganacsadaha ree Venezuela ee Edmundo Kabchi.
Flavio Perchman oo isaga shaqadiisu tahay inuu wixii saxaafada la xidhiidha ee arrimaha Araujo ah dhammeeyo ayaa Jimcihii sheegay in ciyaaryahanku ku faraxsan yahay Barca.
Araujo ayaa doonaya inuu Barca ka qaato mushahar lamid ah midka daafacyada dhexe ee kale kuwaas oo kooxda haatan ku leh doorkiisa mid ka hooseeya, Lenglet iyo Umtiti ayaa kamida xiddigaha ka mushaharka badan balse xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyay aan muhiimka u ahayn kooxda.